Hagaajinta image of GoogleEarth - Geofumed
Muuqaalka sawirka GoogleEarth
Nofeembar, 2007 cadastre, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
Markii hore wuxuu ka hadlayay ku duubaya orthophoto Google Earth haddii aan ogaanay sida ay u socoto.
Hadda waxaan isku dayi karnaa jihada ka soo horjeeda, haddii aan aragno muuqaalka Google, sida loo soo dejiyo iyo dib u dhigo.
Waxa ugu horreeya waa, in aan ogaano waxa wanaagsan iyo sababta aan Google Earth, ka hor mar hore ayaan uga hadalnay arrintaasi. Waa hagaag, waxa ugu horreeya waa in aragtida la furo, iyo waxa aan doonayno waa inaan soo dejinno sawirkaas iyo geesihiisa. Waa inaad joojisaa xulashada xalka si aanad u aragto aragtida ah saddexda waji-gelinta, waa inaad sidoo kale hubisaa in miisaanka waqooyiga iyo aragtida toosan.
1 Calaamadee meesha xiisaha leh
Waa inaad sanduuqa ku dhejisaa qalabka geesaha ee Google Earth, oo ah geesaha meelaha aad rabto inaad gooyso. Markaa waxaad ku dhowdahay inaad ku hesho isku-duwaha UTM, adigoo tilmaamaya astaanta geeska, waa inaad maskaxda ku haysaa in saxnaanta GoogleEarth ay ku dhowdahay soddon mitir si aysan u dhibin jajab tobanlaha.
Haddaba aynu jaray sanduuqa, waa mid ka fogaadaan si qoraalka iyo diirad ma dhici gudahood sanduuqa iyo printscreen la keyboard u sameeyaan iyo nuqul in rinjiga.
Heerkan waxa lagu jari karaa rinjiga, sababtoo ah waa in la sameeyaa si sax ah waa waqti qashin ah inta u dhaxaysa haddii khadadka cas uu ku sii jiro gudaha ama dibadda. Waxaan ku adkeysanayaa, go'aanka GoogleEarth maaha mid u qalma dagaalka dhawr mitir. Hadda waxaan u fureynaa Maareeyaha Muuqaalka Xafiiska (waxay ku timaaddaa Windws) si ay u gooyaan geesaha leh raaxo badan oo la mid ah xulashada dalagga iyo jiidaya dhamaadka, waxaan halkan ku sameeyaa sababtoo ah waxaan rabaa inaan kor u qaado muuqaalka sawirka.
Tani waa sawirkii la soo bandhigay oo isbeddel ah iyo iftiiminta iftiinka.
2 U keenista sanduuqa si Microstation ah
Hadda waxaan dooneynaa in aan ka dhigno sida loo isticmaalo Microstation V8, xogta isuduwaha waxaa lagu soo koobay x, x, y, z, waxaanna ku keydinaynaa qaabka .txt ee isticmaalka eber. Tani waa si aanad u galin dhibcooyinka leh furaha lugta.
Hadda Microstation haddii xogta xyz ah ee la dhoofiyo palette aan la dhaqaajin, ku dhaqso qalabka / qalabyada iyo dooro dhamaadka. Iyadoo qalabkan aan ka soo qaadeyno dhibcaha faylka excel oo ah, taasi waa, waxaan horeyba u haysanaa sida loo fidin karo sawirka.
Si aad u sameyso dhibcaha aad u muuqato waxaad bedeli kartaa midabka iyo dhumucda dhibicda.
3 Hirgalinta sawirka Microstation
Hadda waxaan kaliya u baahanahay in aan soo dejinno sawirka, sababtoo ah waxaan isticmaalnaa taliska maamulaha raajada, iyada oo ikhtiyaarka ah "meel dhexgalo" oo ku rid afarda dhibcood.
Si aan u kala qaadno, waxaan u adeegsanaa taliska warwareega, oo leh doorasho afar-dhibcood ah waxaanan ku muujineynaa gees kasta oo ka mid ah sawirka adoo calaamadeynaya qodobada ay ku habboon tahay.
Marka aan soo bandhigno afarta dhibcood ee aan saxnaa guji shaashadda oo aad samaysay. Sawirka googleearth ah Hadda laga bilaabo halkan sawirkan waxaa lagu badbaadin karaa nooc kasta oo juqraafi ah.
4 Ku dhufo sida ugu haboon ee 🙂
Waxaan ku adkaysanayaa talada ugu dambeysa, qaabka dheer ee aan u sharaxay in aan waqti yar ku qaato safarkan oo horeyba u daalay. Ha u isticmaalin tan arrin culus, sababtoo ah taasi ma bixinayso xogta GoogleEarth. Si aan kuu tuso tusaala, waxaan khariidho khariidadda cadawga.
Cusboonaysii, si aad u soo dejiso sawirrada habka yar ee xanuunka leh waxaa lagu sameyn karaa iyada oo si toos ah isku xireysa nidaamka manifold ama leh Khariidadaha Google Map Downloader
Post Previous«Previous Sawir oo u dir Google Earth
Post Next Sida loo dhejiyo khariidad sawir lehNext »
8 Jawaab in "Georeferencing Google Image Image"
Haa, waa isku mid.
Kaliya waxaad taqaanaa dhibcooyin.
joojiso c. zepeda isagu wuxuu leeyahay:
Ii sheeg haddii ekaanshaha google-ga sawir loo sameeyo si la mid ah in la dhejiyo xaashida kartootada ama UTM ee microstarrada maxaa yeelay waxaan leeyahay dad badan oo aanan ku haboonayn dhibcaha GPS ee iyaga. Maxaan sameeyaa? Waad ku mahadsan tahay GEO wax walba. BLESINGS
roberto galeano vanegas isagu wuxuu leeyahay:
aad u wanaagsan warar aad mar walba brindas yihiin, sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso Waxaan leeyahay MicroStation ah oo aanan diiwaan yaabaa waxaan u maleynayaa in uu leeyahay dhibaato software ayaa haddii aad tahay mid naxariis badan inuu i diro software this aad la waajib lahaa laabgashiga oo dhan na aragtaan iyo sii wadaan in ay this baaqbaaq hadiyad waxbaridda dhowaan ku arko
Ely isagu wuxuu leeyahay:
by fa haddii qof ayaa ii sheegi karaa georeferencio sawir google ah laakiin Idrisi Andes.
Hiwaayad Denis, qaab nooce ah ayaad ka hadlaysaa?
Denis Vasquez isagu wuxuu leeyahay:
sida loo dhejiyo orthophoto leh Microstation v8 marka aan ka saaro mid ka mid ah ayaa ii sheegaysa in faylka aan ku haboonayn in dhici doona?
qalabka samaynta geesoole-yaasha waxay ku yimaadaan dhulka google caadiga ah, waa bararka sare.
Haddii aan la arki karin, ku dhaqdhaqaaq adoo isticmaalaya «arag / Qalabka» oo waa batoonka saddexaad
Bea isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan qabaa su'aal ah oo ku saabsan tallaabada 1, anigu ma soo bandhigi karo fiiqan si loo calaamadeeyo sanduuqa ... Ma isticmaalaan nooca GE PRO ama version caadiga ah?
Horay uugu mahadcelinta jawaabtaada degdegga ah,